AQRISO: Xanta Suuqa Iyo Wargeysyada Oo Hadalhaya Obi Mikel, Terry, Sanchez, Van Gaal, Flamini, Ibrahimovic » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Suuqa Kala iibsiga/AQRISO: Xanta Suuqa Iyo Wargeysyada Oo Hadalhaya Obi Mikel, Terry, Sanchez, Van Gaal, Flamini, Ibrahimovic
AQRISO: Xanta Suuqa Iyo Wargeysyada Oo Hadalhaya Obi Mikel, Terry, Sanchez, Van Gaal, Flamini, Ibrahimovic
Muna Hassan December 19, 2016
Macalinkii hore Manchester United ee Louis van Gaal ayaa ku jira qorshaha inuu macalin cusub u noqdo kooxda Paris St-Germain. (TF1 via Daily Express)
Chelsea qadka dhexe ninka kaga ciyaara John Obi Mikel, 29, ayaa wada hadal kula jira kooxda ka ciyaarta horyaalka Ligue 1 farnce wa kooxda Marseille. (Daily Mirror)
Blues kabtankeeda John Terry, 36, ayaa xitaa bartilmaameedkii ugu weynaa u ah kooxaha ka dhisan horyaalka Chinese Super League,gaar ahaan naadiga Guangzhou Evergrande iyo Shanghai Shenhua oo labaduba xiiseenaya daafacaan. (Daily Express)
Arsenal waxay bixin doontaa £10m sanadkii si ay usii ceshato weerar yahankeeda Alexis Sanchez, 27. (Daily Mail)
Liverpool weerar yahankeeda Divock Origi, 21, ayaa uga digay Everton diyaar garoowgeeda dagaalka caawa ee derby merside. (Telegraph)
Tottenham ayaa u bandhigtay £19m kooxda Atlanta si ay usoo qaadato laacibka qadka dhexe Franck Kessie, 19, waxaa xitaa xiiseenaaya wiilakn Chelsea iyo Manchester United sida la xiganaayo. (Calciomercato)
Crystal Palace ayaa fasaxi karta wiilka dhexe Mathieu Flamini, 32, bisha January. Waxaa lasiiyey fasax uu markale ugu soo laaban karo kooxda Marseille. (Daily Mirror)
Manchester United weerar yahankeeda Zlatan Ibrahimovic, 35, ayaa sheegay inuu u ciyaari karo kooxda unitedka ilaa da’diisa 50-sano. (Daily Star)
Real Madrid weerar yahakeeda James Rodriguez, 25, ayaa leh waan isaga tagi karaa kooxda bisha January , isagoo raadinaya koox uu si joogto ah ugu ciyaaro. (Sky Sports)
Rodriguez waxa uu dhanka kale xaqiijiyey inuu dalabyo is xig xiga ka helaykooxo, sida Chelsea oo ku raadineesa £75m , si ay badal kaga dhigato Oscar,kaasoo aadi doona horyaalka Chinese Super League. (Sun)
Liverpool ayaa aad u xiiseeneysa 19-jirka kooxda Santos weerarka kaga ciyaara Thiago Maia. (ESPN – in Portuguese)
Jurgen Klopp ayaa xitaa ku haminaya kooxda Nantes garabkeeda Amine Harit, 19, kaasoo xitaa bartilmaameed u ah naadiga AC Milan iyo Inter. (Calciomercato)
AC Milan ayaa sheegtay 30-jirka weerarka ka ciyaara Carlos Bacca, kaasoo ay xiiseeneyso kooxda West Ham , inuusan xilligaan iib ka aheyn kooxda. (Evening Standard)
Waa kuwee 10 ciyaaryahan ee Manchester united ay iskaga dirtay si ka fiirsi la’an ah iyado u baahan waa kuwan magacyadooda + sawiradooda
Jose Mourinho Oo U Jawaabay Jamaahiirta Manchester United Kadib Dhacdadii Fellaini